Diyaaraddii Kenya ee “Fokher 50” Oo Burburtay!! | Xaqiiqonews
Diyaaraddii Kenya ee “Fokher 50” Oo Burburtay!!
Diyaarad yar oo kuwa ganacsiga ah oo dooneysay in ay ka kacdo Nayroobi kuna sii jeeday Mombasa ayaa lagu soo waramaya in ay burburtay.
Si cad looma xaqiijin inta qof ee saarneyda diyaaradda, iyo sababta rasmiga ah ee keentay burburka, shilkaas ayaana ka dhacay subaxnimadii jimcada gudaha garoonka Wilson Airport, ee ku yaalla Nayroobi.
Diyaaradda oo nooceedu ahaa “fokher 50” ayaa gashay shilka xilli ay ka kaceysay Garoonka Wilson Airport 09:00 am Subaxnimo xilliga maxaligga ee Nayroobi, waxa ayna ku sii jeeday Magaalada Xeebta ah ee Mombasa.
Warbaahinta Maxaliga ah ayaa ku warantay in uu jiro, khasaareka dhashay bubburka Diyaaradda.
Sidoo Kale Aqri Xog.Maxaa Sababay Buburkii Ethiopian Airline?
Dowladda Kenya ayaa isticmaasha diyaaradaha ay sameysay shirkad maxali ah oo laga leeyahay Denmark, diyaaradahan ayaa ah farsamadii sideedameeyada, iyadoo ay xusid mudan tahay in diyaaradahan ay yihiin kuwa ay yartahay isku haleyntooda.
Diyaarad nooceedu yahay Fokher 50 ayaa hadda ku sugan Kismaayo, waxaana gadaadiid ahaan u isticmaala wafuuda Kenya iyo Kuwa Mucaraadka ee ku sugan Kismaayo.